Imililo ye-Bing ebonakalayo kwaye iya kuseka ukukhangela kwayo kuGoogle | Ndisuka mac
Imililo ye-Bing ebonakalayo kwaye iya kuseka ukukhangela kwayo kuGoogle
URuben inyongo | | i-MacOS High Sierra
Akunakuphikwa ukuba i-injini yokukhangela kuGoogle yeyona idumileyo okwangoku. Kuyinyani ukuba iBing yeMicrosoft inesabelo sayo, kodwa ukuba ibe ngowesibini, umgama awubonakali. Ukukunika umbono, ngokwe idatha yobalookwangoku UGoogle ufumana isabelo sentengiso esingama-86,87%, ngelixa iBing (kwindawo yesibini) ine-5,13% kuphela. Asazi ukuba esi yayisisizathu kuphela okanye isixa esiza kuhlawulwa nguGoogle malunga noku, kodwa u-Apple uthathe isigqibo sokwenza ngaphandle kwe-Bing kwindawo ebonakalayo kunye neziphumo zophando ze-Siri kuzo zombini ii-macOS kunye ne-iOS.
Kananjalo balatha ukusuka 9to5macIsikhangeli seSafari besisebenzisa iGoogle injini ixesha elide. Kwaye ngale ntshukumo, Umsebenzisi wokugqibela kufuneka afumane ukuKhanya okufanayo kunye neziphumo zeSiri njengesikhangeli se-Apple.
Ngokunjalo, akufuneki silibale ukuba uGoogle wenza igalelo minyaka le-ngokweendaba zamva nje- ayingokungathelekiseki Iibhiliyoni ezi-3.000 zeedola ukuze iApple isebenzise injini yokukhangela kwiikhompyuter zazo. Ke ngoko, asinakugweba ukuba isigqibo sokugqibela sikwavunyiwe ngenxa yesi sizathu.
Okwangoku, enye into ebonisiweyo kukuba isithethi sika-Apple esilandelayo-i-HomePod- kufuneka ifike kwiinyanga ezizayo. Ngaba ingaba yile esinye sezizathu zokuba isithethi silibaziseke okoko kwabhengezwa kuluntu ngokubanzi malunga nesiqingatha sonyaka odlulileyo. Olu hlobo lweemveliso lusekela iziphumo zalo kwiinjini yokukhangela. Ukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi injini yokukhangela ekhethiweyo kolu hlobo lwemveliso inokuba sesona sizathu sokuba umsebenzisi wokugqibela akhethe le modeli okanye enye kweli candelo. Ezinye iinkampani ezinje ngeSony okanye iPhilips zisandula ukuhambisa iimodeli zazo kumnyhadala we-IFA eBerlin. Oku kuya kukhuphisana kweli candelo lezithethi ezikrelekrele ezifuna ukuthatha amakhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » i-MacOS High Sierra » Imililo ye-Bing ebonakalayo kwaye iya kuseka ukukhangela kwayo kuGoogle